किन दक्षिण कोरियामा महिलाहरू ब्रा लगाउन छाडिरहेका छन् ? – Dcnepal
प्रकाशित : २०७६ भदौ २० गते ९:२८
बीबीसी । दक्षिण कोरियामा महिलाहरू भित्र ब्रा नलगाई बाहिरी पोसाक मात्र लगाई खिचिएका आफ्ना तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित गरिरहेका छन्। ब्रा नलगाउन चलाइएको #NoBra अभियान सामाजिक सञ्जालमा व्यापक भएको छ।
दक्षिण कोरियामा उनी धेरैका लागि ब्रा नलगाउने अभियानको प्रतीक बनेकी छन्। अनि दक्षिण कोरियाली महिलाहरूले एउटा स्पष्ट सन्देश दिइरहेका छन् ‘ब्रा लगाउनु वा नलगाउनु’ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय हो।
समर्थन जनाइएका केही सन्देश पाए पनि उनले कतिपय महिला र पुरुषबाट आलोचना खेपिरहेकी छन्। धेरैले उनलाई सामाजिक सञ्जालमा अरूको ‘ध्यानाकृष्ट गर्न चाहने’ व्यक्तिको रूपमा चित्रित गर्दै जानीजानी उनले उत्तेजना निम्त्याएको आरोप लगाएका छन्।
महिला अभियानलाई आफ्नो ख्यातिका लागि उनले प्रयोग गरेको केही मानिसको भनाइ छ। ‘म बुझ्छु कि ब्रा लगाउनु तपाईँको इच्छाको कुरा हो। तर आफ्ना स्तनहरू उठेको देखियून् भनेर उनी सधैँ कसिएको कमिज लगाएर तस्बिर खिच्न लगाउँछिन्। उनले त्यसो गर्नु नहुने हो’, इन्स्टाग्राममा एकजना प्रयोगकर्ताले टिप्पणी गरेका छन्।
‘तपाईँले ब्रा नलगाएकोमा हामी केही भन्दैनौँ। हामीले यति भनिरहेका छौँ कि तपाईँले आफ्ना स्तनको मुख देखाउनुहुँदैन’, अर्का प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्।
‘लाज मान्नुपर्छ। के तिमी यसरी गिर्जाघर जान सक्छ्यौरु के यसरी नै आफ्ना दिदीबहिनीका श्रीमान्‌लाई वा सासुससुरालाई भेट्न सक्छ्यौ’, र ‘पुरुषहरूले मात्रै होइन महिलाले पनि यस्तो अवस्थामा असहज महसुस गर्छन्’, प्रयोगकर्ताहरूले पोस्ट गरेका छन्।
ह्वासा नामले चिनिने अर्की चर्चित गायिकाले पनि आफ्ना तस्बिर हालेर ३ल्यद्यचबअभियानलाई फेरि चर्चामा ल्याइन्।
हङ्‌कङमा साङ्गीतिक कार्यक्रम गरी सोल फर्कँदा ब्रा नलगाई सेतो टीशर्टमा खिचिएको उनका तस्बिर र भिडिओ भाइरल भए। तर त्यसयता सर्वसाधारण महिलाबीच पनि ‘नो ब्रा’ अभियान लोकप्रिय भएको छ र यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।
विद्रोहको सङ्केतका रूपमा उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर प्रेषित गरे। ‘इस्केप द कोर्सेट’को नारा अवास्तविक सौन्दर्यको मापदण्डको विरोधमा आएको थियो जसले महिलाहरूलाई शृङ्गार गर्न र छालाको स्याहार गर्न घण्टौँ बिताउन बाध्य पार्छ।
बिबिसीसँग कुरा गरेका धेरै महिलाले यी दुई अभियानबीच महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेको र सामाजिक सञ्जालमा जसरी फैलिरहेको छ त्यसले एउटा नयाँ सक्रियतालाई सङ्केत गरेको बताएका छन्।
पछिल्ला वर्षहरूमा दक्षिण कोरियाली महिलाहरूले पितृसत्तात्मक संस्कार, यौन हिंसा र शौचालय तथा अन्य सार्वजनिक स्थलमा पुरुषहरूले राख्ने ‘जासुसी क्यामेरा’ले निम्त्याएका अपराधहरूको विरोधमा उभिँदै आएका छन्।
बिबिसीसँग कुरा गरेका केही महिलाले अहिले आफूहरू दोधारको अवस्थामा रहेको बताएका छन्। उनीहरू ब्रा नलगाउने अभियानलाई समर्थन गर्छन्, तर ब्रा नलगाई सार्वजनिक स्थलमा जाने आत्मविश्वास उनीहरूमा छैन। त्यसको एउटा ठूलो कारण भनेको उनीहरूमा ‘गेज रेप’ को भय छ।
दक्षिण कोरियामा कसैलाई धेरै हेर्दा यदि उसले आफू हिंसामा परेको महसुस गर्छ भने त्यस्तो हेराइलाई ‘गेज रेप’ भन्ने गरिएको छ। २८ वर्षीया जियोङ सियोङ इन सन् २०१४ मा निर्मित ‘नो ब्राब्लेम’ नामक वृत्तचित्र निर्माण समूहकी सदस्य थिइन्। उक्त वृत्तचित्र ब्रा नलगाउने महिलाहरूको अनुभवका बारेमा थियो।
विश्वविद्यालयका आफ्ना साथीहरूलाई त्यो वृत्तचित्र बनाउन आफूले पहल गरेको र त्यसमा उनले प्रश्न गर्न थालिन्, ‘ब्रा लगाउनु स्वाभाविक हो भन्ने कुरा तपाईँलाई किन लाग्छरु’
यो विषयमा धेरै महिलाहरूले सार्वजनिक रूपमा बहस गर्न थालेकोमा उनी राम्रो महसुस गर्छिन्। अझै केही महिलाहरूलाई स्तनको मुख टीशर्टबाट देखिँदा ‘लज्जित महसुस’ गर्ने गरेको उनलाई लाग्छ।
‘उनीहरूलाई थाहा छ कि दक्षिण कोरियामा ब्रा लगाउनुलाई अझै स्वाभाविक मानिन्छ र त्यही भएर उनीहरू ब्रा लगाउँछन्’, उनी भन्छिन्।
२४ वर्षीया पार्क आई सिउल मोडल हुन्। उनी शरीरबारे सकारात्मक सोच्नुपर्ने अभियानमा संलग्न छिन्। गत वर्ष उनले तीन दिन ब्रा नलगाएर राजधानी सोल जाने र त्यसको भिडिओ बनाउने निधो गरिन्। उक्त भिडिओ २६ हजार पटक हेरिएको थियो।
‘यदि हामीले तार भएको ब्रा लगाएनौँ भने स्तन नुहिने र नराम्रो देखिने भन्ने गलत बुझाइ ममा थियो। तर मैले त्यो भिडियो बनाएपछि म त्यस्तो लगाउँदिनँ। ग्रीष्ममा म ब्रालेट लगाउँछु र जाडोमा ब्रा लगाउँदैलगाउँदिनँ’, उनी भन्छिन्।
यो अभियान राजधानीमा मात्रै सीमित छैन। यसले डाएगुका उद्यमी तथा भिजुअल डिजाइनकी २२ वर्षीया विद्यार्थी नाह्युएन लीलाई पनि प्रेरित गरेको छ। उनले विश्वविद्यालयको स्नातकोत्तर तहमा आफ्नो प्रोजेक्टअन्तर्गत यिप्पी भन्ने एउटा पप अप ब्रान्ड थालिन्। यो वर्षको मे महिनादेखि उनले महिलाका स्तनको मुख छोप्ने निपल प्याच बेचिरहेकी छन्।
‘मेरो प्रेमीले ब्रा लगाउँदा सहज हुँदैन भने नलगाउँदा हुन्छ भन्छन्’, उनी भन्छिन्। उनीहरूको सन्देश भनेको रोज्ने अधिकार महिलासँग हुन्छ तर ब्रा नलगाउनेबारे अध्ययनले के भन्छ तरु
डा. डेइड्रे म्याक गी फिजीओरेथपिस्ट र अस्ट्रेलियाको वोलोन्गोङ विश्वविद्यालयस्थित ‘ब्रेस्ट रिसर्च’की सहनिर्देशक हुन्। ‘मलाई लाग्छ रोज्न पाउने अधिकार महिलासँग छ, तर यदि स्तन ठूला छन् र तिनलाई संभरण गर्ने आधार छैन भने गर्धन र ढाडसमेत शरीरको अङ्गविन्यासमा प्रभाव पर्छ,’ उनी भन्छिन्।
‘महिलाहरूको उमेर बढ्दै जाँदा महिलाहरूको शारीरिक संरचनामा परिवर्तन आउन थाल्छ, छालामा परिवर्तन आउँछ र प्राकृतिक रूपमै संभरणको स्तर घट्छ।’ ‘बिनाआड व्यायाम गर्दा स्तनहरू हल्लिन्छन् र आड दिने स्पोर्ट्स ब्राले स्तनमा पीडा हुन घटाउन तथा गर्धन र ढाडको पीडा हुन नदिन सक्छन्।’
‘हाम्रो अध्ययनले के पाएको छ भने स्तन लैङ्गिक पहिचानको एउटा हिस्सा भएकोले दुइटै स्तन काटेर फालिएका कतिपय महिलाहरूले पनि सो भागलाई सुरक्षित बनाइरहेका हुन्छन्।’
‘अनि यदि तपाईँ आफ्ना स्तन कस्ता देखिन्छन् वा स्तनको चालबारे लज्जित वा सचेत हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यही अप्ठेरो अङ्गविन्यासमा पुग्नुहुन्छ। शल्यक्रिया गरेर स्तन फ्याँकेका केही महिलालाई अङ्गविन्यास र आत्मविश्वासका लागि म ब्रा लगाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्छु।’
पोर्ट्समथ विश्वविद्यालयस्थित बायोमिक्यानिक्स विषयकी प्राध्यापक डा। जेनी बर्बेज भन्छिन् ‘ब्रा लगाउँदा असहजता वा पीडा महसुस गर्ने कुरा स्तनमा राम्ररी नमिलेको ब्रासँग सम्बन्धित छ।
‘हाम्रो अनुसन्धान समूहलाई जानकारी भएसम्म स्तन क्यान्सरको सम्बन्ध ब्रा लगाउनुसँग भएको कुराबारे कुनै विश्वसनीय वैज्ञानिक अध्ययन प्रकाशित भएको पाइएको छैन,’ उनी भन्छिन्। तर महिलाहरूले ब्राको विरोधमा पहिलो पटक चलाएको अभियानको नजिक पनि यो कुरा छैन।
सन् १९६८ को अमेरिका सुन्दरी छनोट कार्यक्रम चलिरहँदा कार्यक्रम स्थलबाहिर भएको प्रदर्शनका क्रममा ब्रा बर्निङ फेमिनिस्ट शब्दावली आएको थियो। महिला प्रदर्शनकारीले ब्रासहितका सामान फोहोरदानीमा फाले जसलाई उनीहरूले साङ्केतिक रूपमा महिलामाथि दमन गर्ने वस्तुको रूपमा हेरेका थिए। यद्यपि उनीहरूले त्यसलाई कहिल्यै जलाएनन्।
अक्टोबर १३ तारिखमा मनाइने ‘नो ब्रा डे’ स्तन क्यान्सरविरुद्ध जनचेतना फैलाउने दिनको रूपमा स्थापित भएको छ। तर गत वर्ष फिलिपिन्समा महिलाहरूले बृहत् लैङ्गिक समानताको माग गर्दै उक्त दिवस मनाए। पत्रकार भेनिसा अल्मेडा भन्छिन्, ‘नो ब्रा डे’ ले महिलावादमा र महिलाका रूपमा हामी के हौँ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ।’
पछिल्ला वर्षमा अभियानकर्मीहरूले महिला र पुरुषको स्तनको मुखबारे अपनाइएको दोहोरो मापदण्डलाई उजागर गर्ने कामलाई एक कदम अगाडि बढाएका छन्।सन् २०१४ को डिसेम्बरमा नेट्फ्लिक्सले एउटा वृत्तचित्र सार्वजनिक गर्‍यो जसमा महिलाहरूको एउटा समूहले न्यूयोर्क महानगरमा महिलाको स्तनलाई अपराधीकरण गर्ने र त्यसमा प्रतिबन्ध लगाउने कदमको विरोध गर्छ।
यसले ‘फ्री द निपल’ अभियानलाई एउटा विश्वव्यापी घटनाको रूपमा अगाडि बढायो। दक्षिण कोरियामा पछिल्लो ‘नो ब्रा’ अभियान महिलाको शरीरलाई लिएर लगाइएका प्रतिबन्धविरुद्ध विश्वव्यापी बढ्दो ध्यानको प्रतिनिधि घटना हो। अभियानमा सहभागी महिलाहरूको भएको विरोधले सांस्कृतिक अपेक्षाको प्रतिरोधलाई देखाउँछ।
अझै यो देशमा धेरै महिलाका लागि यो ‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता’का लागि आधारभूत विषय हो। यी अभियानहरू बढ्दो रूपमा देखिनुले के सुझाउँछन् भने धेरै दक्षिण कोरियाली महिलाका लागि यो ह्याशट्याटको गति तबसम्म कम हुनेछैन जबसम्म ब्रा नलगाउनु समस्याको रूपमा रहनेछ।